Date My Pet » Mety ve ny ho tia an'i A manambady Man?
Mety ve ny ho tia an'i A manambady Man?
Maro ny vehivavy izay raiki-pitia amin'ny lehilahy manambady tsy nahy, raha ny hafa maro iniana hitady lehilahy manambady ny fientanam-po (Pun natao) ho amin'ny olona izay une-misy ara-teknika. Na izany aza, mitoetra foana ny fanontaniana raha toa marina izany ny raiki-pitia amin'ny lehilahy manambady?
Nianjera ny olona manambady mety ho toa marina, indrindra fa raha milaza ny olona mahatsapa toy izany koa izy ireo koa. Ankoatry ny, ny vehivavy amin'ny toe-javatra toy izany dia mety ho diso koa ny hahazo ahiahy fa tsy ho ela ny olona misaraka amin'ny vadiny, ka ny fifandraisany afaka hamony tsy tapaka. Na dia izany aza, ny Hadisoana faha-, mila ho rava tanteraka noho ireto antony ireto.
Ny vehivavy dia tsy maintsy mianatra manaja ny tenany
Ny lehilahy iray dia fianakaviana tsy ho afaka hanatitra ny fahafaham-po ny vehivavy ho amin'ny tena fifandraisana. Na dia ny olona no maka ny fotoana mba hikarakara azy amim-pitandremana, fitiavana, sy ny fanomezam-pahasoavana, ny marina dia, dia tsy hanova zavatra!
Toy izany koa ny vehivavy, dia tokony hiezaka ny tenany tao amin'ny kiraro amin'ny vadin'olona. Inona no ho tsapanao raha toa izy ireo vehivavy iray hafa nanao toy izany koa ho azy ireo? Raha toa ka tena manaja ny tenany, dia tokony hahatakatra fa ny hany zavatra izy ireo dia hiafara manao dia handrava ny fianakaviana, ary izay tsy misy marika na vehivavy te-hanana, Antenaiko!
Ny olona dia tsy handao ny vadiny
Na dia ny olona hihira hatrany hatrany fa ho hisaraka ela ny vadiny mba hahafahany manana fifandraisana tena vaovao hita fitiavana, Tsy hitranga mihitsy. Raha mahita vehivavy ny lehilahy izay manaiky ny manana fifandraisana aminy, satria fantatrareo fa manana fianakaviana, Dia hoy ny lehilahy hiondrana an-fampiononana faritra. Raha izany dia, dia tena tsy te hihazona ny sata-quo, fa izy no tsy te handao ny fianakaviany.
Eritrereto ny lehilahy ny fianakaviany
Vehivavy, aza tia tena! Talohan'ny fanapahan-kevitra ny hanana fifandraisana izany lehilahy manambady, tsarovy ny fianakaviana izay handeha Simba. Ny toe-javatra ratsy kokoa hahazo raha misy ankizy anjara. Ny ankizy dia tena ho voa ratsy indrindra raha ny olona manapa-kevitra ny handao azy ireo. Ary aoka ny tsy hanadino ny vadiny, izay mety ho scarred amin'ny fiainana.
Raha ny zavatra hafa, ny fianakaviana dia tokony handresy lahatra ny vehivavy fa tsy mety raha raiki-pitia tamin'ny lehilahy manambady.
Ny vehivavy dia tsy tokony ho latsaky ny hanorim-ponenana izy ireo mendrika
Nahoana no eto an-tany, moa tsara tarehy, manan-tsaina sy mahay vehivavy te-hanorim-ponenana ho an'ny olona iray izay tsy azo tena nanao amin'ny fifandraisana, satria ny olona efa manambady? Tsy toy izany ny vehivavy ho tsara kokoa ny fiainany iray mitady olona ho tanteraka izay nanolo-tena ho manana tena fifandraisana? Mila amboarina anefa ny vehivavy, ka mino ny tenany sy ny fahaiza-manao iray hisarihana ny olona, izay afaka mizara ny fifandraisana tsy misy tsininy.
Dia maninona ny malahelo nandika ny fitiavana akanim-borona
Ny fitiavana dia iray amin'ireo fihetseham-po sarotra indrindra hifehy. Noho ny tena ny vehivavy, ary mety tena lalina tia manambady lehilahy, ny zava-misy dia ny fifandraisana tsy lohateny na aiza na aiza. Izany no antony, fa tsara ho hifarana izany taloha kokoa, fa tsy taty aoriana, mba hahazoana ampy ny andro anasitranana. Aoka ho azo antoka fa tsy ho mora mihitsy, fa dia ho very maina izany amin'ny farany.
Aza ho entanim-ny hevitry ny olon-kafa
Ny vehivavy iray ao amin'ny fifandraisana amin'ny olona manambady hitsarana olon-kafa avy amin'ny zorony. Ny vehivavy, dia toy izany no, Tokony ho mafy sy Romboty ary ny olona satria izany no zavatra tsara tokony ho atao. Ankoatry ny, dia ho an'ny vehivavy ny soa mba hahafoana izany eny, mba ho afaka hihaona amin'ny olona izay afaka manolo-tena tanteraka ny fananana fifandraisana.
Aza mifandray amin'ny olona noho ny antony
Raha vao ny vehivavy mandrava amin'ny lehilahy manambady, filaza mandidin 'kosa izy, dia mba hamaranana ny karazana fifandraisana amin'ny olona. Mihitsy aza ny vehivavy, dia tokony hanova ny fifandraisana maro izay nampiasaina mba nifandray tamin'ny olona. Izany no ho fanombohan'ny ny fanasitranana.
Tsy misy olona afaka mifehy iza izy raiki-pitia amin'ny, na izany aza, dia zava-dehibe ny mahatsiaro fa tsy mety ny raiki-pitia amin'ny lehilahy manambady. Tamin'io taratasy, ho an 'ireo vehivavy izay efa nifankatia tamin'ny lehilahy manambady, ny fotoana ho hisaraka aminy!